သူတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေအထင်မှားစေမယ့် ကောလဟာလသတင်းတုတွေအပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Top Stars
March 24, 2021 By admin2News
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ… မင်းသမီးချောသရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံဟာဆိုရင် လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းကနေစပြီး အခုချိန်ထိတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများကြောင့် တိမိးရှောင်နေရပေမယ့်လည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက် သတင်းအချက်အလက်တွေကို သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့် မျှဝေပေးလေ့ရှိပါတယ်.။အခုလိုတိမ်းရှောင်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာလည်း သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကောလာဟာလများစွာထွက်ရှိနေတာကြောင့် သူမရဲ့Facebook အကောင့်ကနေပြန်လည်ဖြေရှင်းပြေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်….။
” အခြေအမြစ်မရှိတဲ့ page နဲ့websiteမှာ ပိုင်ဖြိုးသုကပြောကြားလာပါတယ် ဆိုပြီးတင်ထားတဲ့သတင်းတွေ့လိုက်လို့ပါ….သူရေးထားတာကလည်းတကယ်ကိုယုံလောက်စရာ အကွက်ကျကျဇာတ်လမ်းဆင်ရေးထားတာပါ…အခုဒီမှာအဲဒီ့interviewရဲ့linkကိုမထည့်ပေးဘူးဆိုတာ ကျွန်မထည့်ပေးလိုက်မှအဲဒီ့pageအခုထက် reachကောင်းသွားမှာစိုးလို့ပါ….(လက်ရှိတောင်သူ့postကshare5.7K)ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ကို ထင်ယောင် ထင်မှားဖြစ်‌စေမယ့်ခေါင်းစဉ်တပ် ရေးထားတာပါ…
အဲဒီ့postအောက်မှာ ဝိုင်းဝန်းစွပ်စွဲပြောဆိုထားသူများကိုလည်းမေးချင်လို့ပါရှင်…ကျွန်မတို့လင်မယားကဒလန်တွေဆိုရင် ဝရမ်းထုတ်ခံရပါ့မလား??? ကျွန်မတို့သာ အမှန်တရားဘက်ကမရပ်တည်ချင်ရင် အသာလေးရေလိုက်ငါးလိုက် ရေသာခိုနေကြမှာပေါ့ရှင်…(အဲ့သလို နေနေကြသူတွေလည်းရှိနေတာပဲ)အများစိတ်ဆင်းရဲနေရချိန်မှာ ကိုယ့်ဒုက္ခတွေမဝေမျှချင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခုတော့အတိအကျကျွန်မပြောပါရစေ…
ကျွန်မပိုင်ဖြိုးသုသည် မည်သည့်အသွင်ပြောင်း mediaအတု pageအတုကိုမျှ interviewဖြေကြားထားခြင်းမရှိပါ…အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မှ ဝရမ်းပြေးဘဝအတွေ့ကြုံများဆိုပြီး တစ်ရက်သက်သက်ပြောပြရဦးမယ်….” ဆိုပြီးလက်ရှိပြန့်နှံ့နေတဲ့ ကောလဟာလသတင်းအတုတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာတာကြောင့် ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိစေရန်အတွက် တစ်ဆင့်ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်..။
ပရိတျသတျကွီးရေ… မငျးသမီးခြောသရုပျဆောငျပိုငျဖွိုးသုတို့ဇနီးမောငျနှံဟာဆိုရငျ လူထုလှုပျရှားမှုတှကေို ဖဖေျောဝါရီလပိုငျးကနစေပွီး အခုခြိနျထိတကျကွှစှာပူးပေါငျးပါဝငျနကွေသူတှပေဲဖွဈပါတယျနျော.။လကျရှိဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနမြေားကွောငျ့ တိမိးရှောငျနရေပမေယျ့လညျးနစေ့ဉျရကျဆကျ သတငျးအခကျြအလကျတှကေို သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ မြှဝပေေးလရှေိ့ပါတယျ.။အခုလိုတိမျးရှောငျနတေဲ့အတောအတှငျးမှာလညျး သူမတို့ဇနီးမောငျနှံနဲ့ပတျသကျပွီး ကောလာဟာလမြားစှာထှကျရှိနတောကွောငျ့ သူမရဲ့Facebook အကောငျ့ကနပွေနျလညျဖွရှေငျးပွေးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော….။
” အခွအေမွဈမရှိတဲ့ page နဲ့websiteမှာ ပိုငျဖွိုးသုကပွောကွားလာပါတယျ ဆိုပွီးတငျထားတဲ့သတငျးတှလေို့ကျလို့ပါ….သူရေးထားတာကလညျးတကယျကိုယုံလောကျစရာ အကှကျကကြဇြာတျလမျးဆငျရေးထားတာပါ…အခုဒီမှာအဲဒီ့interviewရဲ့linkကိုမထညျ့ပေးဘူးဆိုတာ ကြှနျမထညျ့ပေးလိုကျမှအဲဒီ့pageအခုထကျ reachကောငျးသှားမှာစိုးလို့ပါ….(လကျရှိတောငျသူ့postကshare5.7K)ရညျရှယျခကျြရှိရှိနဲ့ကို ထငျယောငျ ထငျမှားဖွဈ‌စမေယျ့ခေါငျးစဉျတပျ ရေးထားတာပါ…
အဲဒီ့postအောကျမှာ ဝိုငျးဝနျးစှပျစှဲပွောဆိုထားသူမြားကိုလညျးမေးခငျြလို့ပါရှငျ…ကြှနျမတို့လငျမယားကဒလနျတှဆေိုရငျ ဝရမျးထုတျခံရပါ့မလား??? ကြှနျမတို့သာ အမှနျတရားဘကျကမရပျတညျခငျြရငျ အသာလေးရလေိုကျငါးလိုကျ ရသောခိုနကွေမှာပေါ့ရှငျ…(အဲ့သလို နနေကွေသူတှလေညျးရှိနတောပဲ)အမြားစိတျဆငျးရဲနရေခြိနျမှာ ကိုယျ့ဒုက်ခတှမေဝမြှေခငျြပမေယျ့ ဒီတဈခုတော့အတိအကကြှနျမပွောပါရစေ…
ကြှနျမပိုငျဖွိုးသုသညျ မညျသညျ့အသှငျပွောငျး mediaအတု pageအတုကိုမြှ interviewဖွကွေားထားခွငျးမရှိပါ…အရေးတျောပုံကွီးအောငျမှ ဝရမျးပွေးဘဝအတှကွေုံ့မြားဆိုပွီး တဈရကျသကျသကျပွောပွရဦးမယျ….” ဆိုပွီးလကျရှိပွနျ့နှံ့နတေဲ့ ကောလဟာလသတငျးအတုတှနေဲ့ပတျသတျပွီး ပွနျလညျဖွရှေငျးလာတာကွောငျ့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိစရေနျအတှကျ တဈဆငျ့ပွနျလညျ ကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျနျော။ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျကွီးကိုအထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော..။
ပြည်သူတွေအတွက် သူကိုယ်တိုင်ကြိုးစားရှာဖွေစုဆောင်းထားတဲ့ ငွေကြေးတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းနေတဲ့ ညီညီမောင်(စမ်းချောင်း)